တရုတ် TFT-LCD အမြှေးပါးခလုတ် ထုတ်လုပ်သူနှင့် ရောင်းချသူများ |Xinhui
LCD (Liquid Crystal Display အတွက် အတိုကောက်) အရည်ကြည်လင်သော မျက်နှာပြင်။
LCD တည်ဆောက်ပုံသည် အပြိုင်ဖန်အလွှာနှစ်ခုကြားတွင် အရည်ပုံဆောင်ခဲဆဲလ်တစ်ခုကို ထားရှိရန်ဖြစ်သည်။အောက်ခြေအလွှာမှန်ကို TFT (ပါးလွှာသောဖလင်ထရန်စစ္စတာ) တပ်ဆင်ထားပြီး အပေါ်ပိုင်းမျက်နှာပြင်တွင် အရောင်စစ်ကာများ တပ်ဆင်ထားသည်။အရည်ပုံဆောင်ခဲ မော်လီကျူးများကို ထိန်းချုပ်ရန်အတွက် TFT ရှိ အချက်ပြနှင့် ဗို့အားကို ပြောင်းလဲထားသည်။ပစ်ဇယ်အမှတ်တစ်ခုစီ၏ polarized light ကို display ၏ရည်ရွယ်ချက်အောင်မြင်စေရန်အတွက် ဦးတည်ချက်ကို လှည့်ပါ။
LCD သည် CRT ကို ပင်မရေစီးကြောင်းအဖြစ် အစားထိုးခဲ့ပြီး စျေးနှုန်းမှာ များစွာကျဆင်းသွားကာ အပြည့်အဝရေပန်းစားလာခဲ့သည်။
မတူညီသောနောက်ခံအလင်းရင်းမြစ်များအရ LCD ကို CCFL နှင့် LED ဟူ၍ နှစ်မျိုးခွဲခြားနိုင်သည်။
Liquid Crystal Display များကို LED နှင့် LCD များအဖြစ် ပိုင်းခြားနိုင်သည်ဟု သုံးစွဲသူများစွာက ယုံကြည်ကြသည်။အတိုင်းအတာတစ်ခုအထိ၊ ဤနားလည်မှုသည် ကြော်ငြာများဖြင့် လွဲမှားနေသည်။
စျေးကွက်ရှိ LED display သည်မှန်ကန်သော LED display မဟုတ်ပါ။အတိအကျပြောရလျှင် ၎င်းသည် LED-backlit အရည် crystal display ဖြစ်သည်။အရည်ပုံဆောင်ခဲ panel သည် သမားရိုးကျ LCD မျက်နှာပြင်တစ်ခု ဖြစ်နေဆဲဖြစ်သည်။တစ်နည်းအားဖြင့် ဤအရာသည် အနည်းငယ် လိမ်လည်မှုဖြစ်သည်။သဘာဝ!၎င်း၏ “LEDTV” LCD TV များသည် သုံးစွဲသူများကို လှည့်စားသည်ဟု သံသယရှိသောကြောင့် တောင်ကိုရီးယား၏ Samsung သည် နိုင်ငံ၏ ကြော်ငြာဥပဒေများကို ချိုးဖောက်သည်ဟု ဗြိတိန် ကြော်ငြာအဖွဲ့မှ တစ်ချိန်က ပြစ်ဒဏ်ချမှတ်ခဲ့သည်။အရည်ပုံဆောင်ခဲ ဖန်သားပြင်များအတွက် အရေးကြီးဆုံးသော့မှာ ၎င်း၏ LCD panel နှင့် backlight အမျိုးအစားဖြစ်ပြီး စျေးကွက်ရှိ LCD panel များသည် ယေဘူယျအားဖြင့် တူညီသည့် TFT panels ကို အသုံးပြုကြသည်။LEDs နှင့် LCD များကြား ခြားနားချက်မှာ ၎င်းတို့၏ နောက်ခံအလင်း အမျိုးအစားများ ကွဲပြားသည်- LED နောက်ခံအလင်း နှင့် CCFL နောက်ခံမီး (ဆိုလိုသည်မှာ ချောင်းမီးချောင်းများ) သည် diodes နှင့် cold cathode မီးချောင်းများ အသီးသီးဖြစ်သည်။
LCD သည် Liquid Crystal Display ၏ အတိုကောက်ဖြစ်ပြီး "liquid crystal display" ဆိုသည်မှာ အရည် crystal display ဖြစ်သည်။LED သည် နောက်ခံအလင်းအရင်းအမြစ်အဖြစ် LED (အလင်းထုတ်လွှတ်သည့်ဒိုင်အိုဒ) ပါသည့် အရည်ပုံဆောင်ခဲမျက်နှာပြင် (LCD) ဖြစ်သည့် အရည်ပုံဆောင်ခဲပြကွက် (LCD) အမျိုးအစားကို ရည်ညွှန်းသည်။LCD တွင် LED များပါဝင်သည်ကိုတွေ့မြင်နိုင်သည်။LED ၏ အစိတ်အပိုင်းသည် အမှန်တကယ် CCFL ဖြစ်သည်။
နောက်ခံအလင်းရင်းမြစ်အဖြစ် CCFL (အေးသော cathode ချောင်းမီးချောင်း) ပါရှိသော အရည်ပုံဆောင်ခဲပြကွက် (LCD) ကို ရည်ညွှန်းသည်။
CCFL ၏ အားသာချက်မှာ အရောင်စွမ်းဆောင်မှု ကောင်းမွန်သော်လည်း အားနည်းချက်မှာ ပါဝါသုံးစွဲမှု မြင့်မားသည်။
နောက်ခံအလင်းအရင်းအမြစ်အဖြစ် LEDs (အလင်းထုတ်လွှတ်သောဒိုင်အိုဒက်များ) ကိုအသုံးပြုသည့် အရည်ပုံဆောင်ခဲပြကွက် (LCD) ကို ရည်ညွှန်းပြီး ယေဘုယျအားဖြင့် WLEDs (အဖြူရောင်အလင်းအယ်လ်အီးဒီများ) ကို ရည်ညွှန်းသည်။
LED ၏ အားသာချက်များမှာ သေးငယ်ပြီး ပါဝါသုံးစွဲမှု နည်းပါးသည်။ထို့ကြောင့် LED ကိုနောက်ခံအလင်းအရင်းအမြစ်အဖြစ်အသုံးပြုခြင်းသည်အလင်းနှင့်ပါးလွှာမှုကိုထည့်သွင်းစဉ်တွင်မြင့်မားသောတောက်ပမှုကိုရရှိနိုင်သည်။အဓိကအားနည်းချက်မှာ CCFL ထက် အရောင်စွမ်းဆောင်ရည်က ပိုဆိုးသောကြောင့် ပရော်ဖက်ရှင်နယ်ဂရပ်ဖစ် LCD အများစုသည် ရိုးရာ CCFL ကို နောက်ခံအလင်းအရင်းအမြစ်အဖြစ် အသုံးပြုဆဲဖြစ်သည်။
ယေဘုယျအားဖြင့် ပြောရလျှင် ကုန်ကျစရိတ် လျှော့ချခြင်းသည် ကုမ္ပဏီများ ရှင်သန်ရန် အရေးကြီးသော စည်းမျဉ်းတစ်ခု ဖြစ်လာသည်။TFT-LCD ၏ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုသမိုင်းတစ်လျှောက်တွင်၊ ဖန်သားအိမ်၏အရွယ်အစားကိုတိုးမြှင့်ခြင်း၊ မျက်နှာဖုံးအရေအတွက်ကိုလျှော့ချခြင်း၊ အခြေခံဘူတာရုံများ၏ကုန်ထုတ်စွမ်းအားနှင့်ထုတ်ကုန်အထွက်နှုန်းတိုးလာခြင်းနှင့် အနီးနားရှိကုန်ကြမ်းများဝယ်ယူခြင်းတို့သည် TFT- များစွာ၏စဉ်ဆက်မပြတ်ကြိုးပမ်းအားထုတ်မှုများကိုရှာဖွေရန်ခက်ခဲသည်မဟုတ်ပါ။ LCD ထုတ်လုပ်သူများ။.
မှန်အလွှာသည် TFT-LCD ထုတ်လုပ်မှုအတွက် အရေးကြီးသော ကုန်ကြမ်းဖြစ်ပြီး ၎င်း၏ကုန်ကျစရိတ်မှာ TFT-LCD စုစုပေါင်းကုန်ကျစရိတ်၏ 15% မှ 18% ခန့်ရှိသည်။၎င်းသည် ပထမမျိုးဆက်လိုင်း (300mm × 400mm) မှ လက်ရှိ ဒသမမျိုးဆက်လိုင်း (2,850mm × 3,050) အထိ ဖွံ့ဖြိုးလာခဲ့သည်။မီလီမီတာ) ၎င်းသည် အနှစ်နှစ်ဆယ် တိုတောင်းသော ကာလကို ဖြတ်သန်းခဲ့သည်။သို့သော်၊ TFT-LCD ဖန်သားအိမ်၏ ဓာတုဖွဲ့စည်းမှု၊ စွမ်းဆောင်ရည်နှင့် ထုတ်လုပ်မှု လုပ်ငန်းစဉ် အခြေအနေများအတွက် အလွန်မြင့်မားသော လိုအပ်ချက်များကြောင့်၊ ကမ္ဘာလုံးဆိုင်ရာ TFT-LCD ဖန်သားမျက်နှာပြင် ထုတ်လုပ်မှုနည်းပညာနှင့် စျေးကွက်ကို အမေရိကန်ပြည်ထောင်စုရှိ Corning၊ Asahi Glass နှင့် စျေးကွက်တွင် နှစ်ပေါင်းများစွာ အသုံးပြုလာခဲ့သည်။ Electric Glass စသည်တို့ကို ကုမ္ပဏီအနည်းငယ်က လက်ဝါးကြီးအုပ်ထားသည်။စျေးကွက်ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေး ခိုင်မာအားကောင်းသော မြှင့်တင်မှုအောက်တွင်၊ ကျွန်ုပ်၏ပြည်မကြီးသည် ၂၀၀၇ ခုနှစ်တွင် R&D နှင့် TFT-LCD ဖန်သားမျက်နှာပြင်များ ထုတ်လုပ်မှုတွင် တက်ကြွစွာ ပါဝင်ဆောင်ရွက်ခဲ့ပါသည်။ လက်ရှိတွင် ပဉ္စမမျိုးဆက်၏ TFT-LCD ဖန်သားမျက်နှာပြင် ထုတ်လုပ်မှုလိုင်းများနှင့်၊ အထက်ကို တရုတ်က ဆောက်တယ်။၎င်းသည် 2011 ခုနှစ် ဒုတိယနှစ်ဝက်တွင် 8.5-generation high-generation liquid crystal glass substrate production line project နှစ်ခုကို စတင်ရန် စီစဉ်ထားသည်။
၎င်းသည် ကျွန်ုပ်၏နိုင်ငံရှိ ပြည်မကြီးရှိ TFT-LCD ထုတ်လုပ်သူများအတွက် အထက်ပိုင်းကုန်ကြမ်းများကို ဒေသအဖြစ်ပြောင်းလဲခြင်းအတွက် အရေးကြီးသောအာမခံချက်နှင့် ထုတ်လုပ်မှုကုန်ကျစရိတ်များကို သိသာထင်ရှားစွာ လျှော့ချပေးပါသည်။
TFT ထုတ်လုပ်မှုနည်းပညာ၏ အဓိကအကျဆုံးအပိုင်းမှာ ထုတ်ကုန်အရည်အသွေးကို ဆုံးဖြတ်ရာတွင် အရေးကြီးသောအစိတ်အပိုင်းတစ်ခုသာမက ထုတ်ကုန်ကုန်ကျစရိတ်အပေါ် သက်ရောက်မှုရှိသော အဓိကအစိတ်အပိုင်းတစ်ခုဖြစ်သည့် photolithography လုပ်ငန်းစဉ်ဖြစ်သည်။photolithography လုပ်ငန်းစဉ်တွင်၊ မျက်နှာဖုံးကိုအာရုံစိုက်မှုအများဆုံးဖြစ်သည်။၎င်း၏အရည်အသွေးသည် TFT-LCD အရည်အသွေးကို ကြီးမားသောအတိုင်းအတာအထိ ဆုံးဖြတ်ပေးကာ ၎င်း၏အသုံးပြုမှုကို လျှော့ချခြင်းဖြင့် စက်ပစ္စည်းများ ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုကို ထိထိရောက်ရောက် လျှော့ချနိုင်ပြီး ထုတ်လုပ်မှုစက်ဝန်းကို တိုစေနိုင်သည်။TFT ဖွဲ့စည်းပုံ ပြောင်းလဲခြင်းနှင့် ထုတ်လုပ်မှု လုပ်ငန်းစဉ် တိုးတက်ခြင်းတို့နှင့်အတူ၊ ထုတ်လုပ်ရေး လုပ်ငန်းစဉ်တွင် အသုံးပြုသည့် မျက်နှာဖုံး အရေအတွက် သိသိသာသာ လျော့ကျသွားသည်။TFT ထုတ်လုပ်မှုလုပ်ငန်းစဉ်သည် အစောပိုင်း 8-mask သို့မဟုတ် 7-mask lithography လုပ်ငန်းစဉ်မှ လက်ရှိအသုံးများသော 5-mask သို့မဟုတ် 4-mask lithography လုပ်ငန်းစဉ်သို့ ပြောင်းလဲလာသည်ကို တွေ့မြင်နိုင်သည်၊၊ ၎င်းသည် TFT-LCD ထုတ်လုပ်မှုလည်ပတ်မှုနှင့် ထုတ်လုပ်မှုကုန်ကျစရိတ်တို့ကို များစွာလျှော့ချပေးနိုင်သည် .
4 Mask lithography လုပ်ငန်းစဉ်သည် စက်မှုလုပ်ငန်းတွင် ပင်မရေစီးကြောင်းဖြစ်လာသည်။ထုတ်လုပ်မှုကုန်ကျစရိတ်ကို စဉ်ဆက်မပြတ်လျှော့ချနိုင်ရန်၊ photolithography လုပ်ငန်းစဉ်တွင် အသုံးပြုသည့် မျက်နှာဖုံးအရေအတွက် နောက်ထပ်လျှော့ချနည်းကို လူများက စူးစမ်းရှာဖွေခဲ့ကြသည်။မကြာသေးမီနှစ်များအတွင်း၊ အချို့သောကိုရီးယားကုမ္ပဏီများသည် 3-mask lithography လုပ်ငန်းစဉ်ကို တီထွင်နိုင်ခဲ့ပြီး အစုလိုက်အပြုံလိုက်ထုတ်လုပ်မှုကို ကြေညာခဲ့သည်။သို့သော်လည်း 3-mask လုပ်ငန်းစဉ်၏ ခက်ခဲသောနည်းပညာနှင့် အထွက်နှုန်းနည်းသောကြောင့်၊ နောက်ထပ်တိုးတက်မှုရှိသေးသည်။ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုနှင့် တိုးတက်မှုအောက်တွင်။ရေရှည်ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု ရှုထောင့်မှကြည့်လျှင် Inkjet (အင်ဂျတ်) ပုံနှိပ်နည်းပညာသည် အောင်မြင်မှုတစ်ခုရရှိပါက၊ မျက်နှာဖုံးမပါသော ထုတ်လုပ်မှုကို နားလည်သဘောပေါက်ခြင်းသည် လူတို့ လိုက်စားသည့် နောက်ဆုံးပန်းတိုင်ဖြစ်သည်။
ယခင်- LCM (LCDModule) ထုတ်လုပ်သူ/ထုတ်လုပ်သူများ
နောက်တစ်ခု: ခံနိုင်ရည်ရှိသော ထိတွေ့မျက်နှာပြင် တင်ပို့သူ/တင်ပို့သူများ